कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: विदेशमा विभिन्न पेशामा रही कार्यरत कीर्तिपुरियनहरुको Covid -19 को अनुभव —७
विदेशमा विभिन्न पेशामा रही कार्यरत कीर्तिपुरियनहरुको Covid -19 को अनुभव —७
पुनश्चः अघिल्ला अंकमा प्रकाशित महानुभावहरु र यो अंकमा प्रकाशित महानुभावहरु साथै पछिल्लो अंकमा प्रकाशित हुने महानुभावहरु नयाँबजार क्लबबाट संचालित कीर्तिपुर एम्वुलेन्सलाई (Ambulence) निरन्तरता दिन नयाँ सवारी साधन व्यवस्थापनको क्रममा सहयोग गर्ने सहयोगी तथा शुभचिन्तकहरु हुनुहुन्छ । सहयोगी, शुभचिन्तक र कीर्तिपुरीयनको नाताले विश्वभर Covid-19 ले मानिसहरुको जनजीवन थिलथिलो पारेको अवस्थामा उहाँहरुबाट आफु बसाईसरेको ठाउँको स्थिति जानकारी राख्ने तथा उहाँहरुको अनुभव, वस्तुस्थिति र उहाँहरुको छोटो परिचय समेत समावेश गरी धेरैजसोले अंग्रेजी माध्यमबाट लेखी पठाउनु भएका र उहाँहरुसंग भएको भला कुसारीको विषयवस्तुको मूलभाव कायम रहने गरीे यो आलेख तयार पारीएको हो ।
कीर्तिपुरबाट सन् २००८ मा America जानु भएका बुद्धरत्न महर्जनको भोगाइः
कीर्तिपुर नगरपालिका—२ गःसी टोल निवासी बुद्धरत्न महर्जन बिदेश प्रस्थान गर्नु अघि नेपालमा Ptan Multiple College र Asian Intl'l college मा अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ परिवार सहित America को 933 Sugarbush Tri Lexington Kentuky 40509 मा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ । हाल उहाँ Kentuky को Humana कम्पनीेमा Data Analyst पदमा कायर्रत हुनुहुन्छ ।
Covid-19 विश्वभरि फैलिएपछि ब्यक्तिगत अवस्था वा अनुभवः April 21 मा पठाउनु भएको पत्रको आधारमा पहिलो कोभिड केस Kentuky मा मार्च १३ शुक्रबार फेला प¥यो । यो बिरामी अर्को काउन्टी County भनेको हाम्रो जिल्ला भने जस्तै हो) का थिए जो उनको उपचारका लागि बेलायत आएका थिए । बेलायतको अस्पताल हाम्रो काउन्टीमा छ । यो केन्टकी
राज्यमा पहिलो केस हो । केन्टकी राज्यको गभर्नरले मार्च, १६देखि सामाजिक दुरीको साथ स्कुल, खेलकुद, क्लब, गैर किराना पसल र रेस्टुरेन्ट आदि क्षेत्रलाई सटडाउन घोषणा गरेको छ । तर कुनै बन्दाबन्दी गरेको छैन । यो कार्य गरेर गभर्नरले भाइरस फैलिनबाट रोक्न एउटा ठूलो कदम चालेको हो । कोभिड–१९ आज सम्म ३०५० मा संक्रमण र मृत्युको संख्या १५४ मात्र केन्टुकीमा भएको छ । पहिलो Positive बिरामी दुई हप्ता उपचार पछि निको भएर गयो। अमेरिकीहरू कोरोना भाइरससँग
(Governer) राज्यपालले पनि सामाजिक दुरी राख्न र घरमै बस्न आग्रह गरेको छ । तर पनि मानिसहरू बाहिर छन् र सामाजिक दुरीमा नबसेको देखिन्छ । सबै व्यवसायहरु बन्द छैनन् त्यसैले मानिसहरू काममा जानु पर्छ । अधिकांशतः एशियाली मानिसहरू, रोजगारको डाटाका अनुसार घरमै बसिरहेका छन् । यहाँका मानिसहरु सामाजिक
दुरीमा नबसेको र यहाँ बन्दाबन्दी नगरेको र कुनै पनि व्यवसायीक संगठन बन्द नगरेको कारणबाट आज संक्रमण ३०५० जना पुगेको हो । गत आइतवार, सबै साना व्यवसाय गर्ने मानिसहरु र गैर स्टोर मालिकहरू “घर बस्न घोषणा“ को बिरोध जनाउन राज्यपालको निवास, राजधानीमा गए । उनीहरूको माग सबै व्यवसाय पुनः खोल्नु पर्छ भन्नेहो ।
राष्ट्रपतिले व्यवसायहरु पुनः खोल्न घोषणा गरे अनुसार हाम्रो कम्पनी Humanaले सबै कामदारलाई कार्यालयमा पुनः काम गराउन सुरक्षाका आवश्यक चीजहरू पनि तयार गरिरहेको छ। वास्तवमा हामी घरबाट काम गर्दैछौं । तर अर्कोतर्फ पब्लिक स्कुल सुपरिटेन्डेन्टले आज घोषणा ग¥यो कि स्कूल यस वर्षको लागि पुनः सुचारू गर्न सकिदैन । सबै कक्षा अनलाइन बाट हुनेछ । मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर, वाइपहरु अझै बजारमा उपलब्ध छैन । मैले एक महिनाभन्दा बढी पर्खिएपछि अनलाइनबाट अर्डर गर्ने मौका पाएँ तर ती सबै अर्डरहरू उपलब्ध नभएको
कारणले फेरि अर्डर गरियो । दुई महिना भन्दा बढी पर्खिए पछि भाग्यवश आज पाएँ । हामी महिनामा एकपटक किराना पसलमा जान्छौं ।
अप्रिल २६, २०२०, ७ः३० अपराह्न, हामीहरुले किराना पसलबाट सामान खरिद गरेर ल्याएँ र ती खाद्य समाग्रीहरू ग्यारेज भित्र राख्यौं र खाद्य पदार्थहरूजस्तै फलफूल, तरकारीहरू, दूध ग्यालन, अण्डा, मासु प्याकेट आदि सफावा साबुनको पानीले सफा ग¥यौ । त्यस पछि मात्र हामी फ्रिजमा राख्दछौं । हामी किराना पसलबाट फर्केपछि नुहाउने गर्छौं ।
धेरैजसो समय हामी घरमै बस्छौं। हामी प्रत्येक बिहान परिवारको साथ कम्तिमा एक घण्टा व्यायाम गर्दैछौं, कागती सहितको तातो पानी प्रतिदिन पिउँछौं, प्रायस हामी भिटामिन सी भएको फलफुल खाइरहेका हुन्छौं र मौसम राम्रो छ भने हाम्रो परिवार मात्र मिलेर घर पछाडि खेल्छौं ।
सुझावहरूः C D C ले दिएको दिशा निर्देशहरू अनुसरण गर्नु सवैभन्दा राम्रो अभ्यास हुनेछ । जस्तो १. प्रायस घरमा बस्नुहोस् र आवश्यक भएमा मात्र बाहिर जानुहोस् । उदाहरणको लागि, जब किराना पसलमा किन्न जानु परेमा, सामाजिक दुरी कायम गरी कम्तिमा एक हप्ताको लागि अझ यदि सम्भव भए २ हप्ता वा सो भन्दा बढीको लागी सामानहरु किन्नुहोस् । २. सामाजिक दुरीमा रहनुहोस्, बारम्बार हात धुनुहोस् । तपाईं बाहिर जानुहुँदा मात्र ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् । ३. दीर्घ
बिरामीले विशेष मास्क लगाउनुहोस् । ४. मौसम राम्रो वा घाम लागेको बेला घाम ताप्न र ताजा हावा लिन कौसी वा आफ्नो कम्पाउण्ड भित्र गतिविधिहरू जस्तै चित्रकला, कोठाको सजावट, पारिवारीक रमाईलो, केहि रचनात्मक कार्यहरू आदि गर्नुहोस् । २. यदि तपाईले यस महामारीको बखत कसैलाई सम्पर्क गर्न चाहानु भयो भने भिडियो कल मार्फत उनीहरूलाई सम्पर्क गर्नु राम्रो हुन्छ ।
कीर्तिपुरबाट सन् २००२ मा Netherland (Holland) जानुभएका पूर्ण चन्द्र महर्जनको भोगाइः
पूर्ण चन्द्र महर्जन
कीर्तिपुर न. पा. ६– पाण्डे छाप (क्वाःर),कीर्तिपुर निवासी पूर्ण चन्द्र महर्जन, विदेश प्रस्थान गर्नु अघि नेपालमा कलेज विद्यार्थी हुनहुन्थ्यो ।उहाँ परिवार सहित Amsterdam, Netherland मा बसोबास गर्नुहुन्छ । हाल उहाँ Amsterdam को L & M Education designing Company मा Graphic designer को रुपमा कायर्रत हुनुहुन्छ ।
Covid-19 विश्वभरि फैलिएपछि ब्यक्तिगत अवस्था वा अनुभवः Jun5मा भएको भला कुसारीको आधारमा )
कोभिड –१९ चीनमा शुरु हुँदा खासै रुपमा यहाँ यस वारेमा कुनै चासो लिएको देखिएन । युरोपमा फैलिदा, यहाँ पूर्व तयारी नभएको कारणले गर्दा ठुलै संत्रासमा रहनु प¥यो । शुरु शुरुमा हामीहरु पनि घरबाट ननिस्किकन
बस्यौं । यहाँको सरकारले नागरिकहरु लाई कोभिडबारे सचेत गर्ने कार्य लगातार गर्दै गएपछि खासै पछि पछि डर लागेन र त्रासमा बस्नु परेन । यो रोगबारे सचेत भइयो ।
यो Democratic country हो यहाँ पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्न मिल्दैन भनेर यहाँको सरकारले मार्च १४ देखि भद्र लकडाउन घोषणा गरेको थियो । तर यहाँ पूर्ण रुपमा लकडाउन गरेनन् मात्र Intelligent Lockdown गरेर नै यहाँ सामान्य स्थिति कायम गर्न सके । Intelligent Lockdown भन्नाले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन सरकारले तयार गरेको नीति नियम पूर्णमा पालना गरेर घरबाट बाहिर जान पाउने व्यवस्था हो । जस्तैः अति आवश्यक भएमा मात्र घरबाट बाहिर निस्कने, भौतिक दुरी १.५ मीटर रहेर हिड्नु पर्ने, मानिसहरु हुलमुल गर्न नपाउने आदि । सरकारले बनाएको नीति नियम यदि सम्पुर्ण नागरिकहरुले पालना गर्छ गर्दैन ३ हप्ता सम्म हेर्र्ने, अनुशासित भएर पालना भएमा पूर्ण लकडाउन नगर्ने अग्रिम घोषणा गरिएको थियो । नीति नियम पालना नगरेमा सरकारबाट प्रति व्यक्ति ३८० युरो जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
यस अवस्थामा पनि रेल, सार्वजनिक बस, ठुला ठुला पसल संचालनमा थियो । तर ती यातयात अति आवश्यक मानिसहरुले मात्र प्रयोग गर्थे । तर शुरु शुरुको दिन देखि नै धेरै मानिस जम्मा हुने ठाउँ विद्यालय, कलेज उद्योग, कम्पनी, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, अफिस खेल्ने ठाउँ, जीम हल आदि आफसे आफ संत्रासको कारणबाट बन्द भयो । यहाँ अप्रिलमा कोरोना संक्रमण उच्च तहमा पुगेको थियो । अहिले सामान्य अवस्थामा आइसेकेको छ । यहाँ सम्पूर्ण कलेज, स्कुल, अफिस, बस, रेल आदि संचालनमा आइसकेका छन् । यहाँको जनजीवन सामान्य भइसक्यो । यहाँ जुनबेला व्यापक संक्रमण भयो उक्त समयमा अस्पतालमा विरामी राख्ने ठाउँ सम्मको अभाव भएको थियो ।
जुनबेला संक्रमण उच्च बिन्दुमा थियो त्यतिबेला संक्रमित मानिसहरु ४७,१५० जना, मृत्यु भएका मानिसहरु ६००३ जना थियो । रोगसंग लड्न सक्ने क्षमताले गर्दा होला, सुरुसुरुमा बालबालिका युवाहरुमा खासै संक्रमण देखिएको थिएन । बृद्धहरुमा मात्र संक्रमण देखिएको थियो । जब यो रोग व्यापक रुपमा फैलिन थाल्यो त्यतिबेला उपचारको क्रममा सरकारले वालवालिकालाई पहिलो प्राथमिकता, त्यसपछि युवा तथा युवतिहरुलाई दोश्रो र बुढाबुढीहरुलाई अन्तिम प्राथमिकता दिएको थियो ।
अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै भएको समयमा बुढाबुढीहरु लाई अस्पतालमा नआइ घरमा बसेर उपचार गर्न सम्म भनिएको थियो । त्यसकारण ७० बर्ष भन्दा बढी उमेरका मानिसहरु धेरै मृत्यु भएको हो । सरकारले नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएको सुविधाको कुरा गर्नु पर्दा यहाँ कामबाट हटेकाहरुलाई सरकारबाट ९० प्रतिशत र कम्पनीबाट १० प्रतिशत पारिश्रमिक बेहोरिएको थियो । सुरु सुरुमा यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु चाहिने सामाग्रीहरु अभाव भएको थियो । तसर्थ यहाँ ८ जना भन्दा बढी डाक्टर र नर्सहरु मृत्यु भएको सुन्नमा पाइन्छ । कोभिड–१९ उपचारका रहेका स्वास्थ्यकर्मी हरुलाई थप पारिश्रमिक प्रदान गरिएको थियो ।
कीर्तिपुरका साथीभाईहरुलाई सरकारबाट बनाएको नियमहरु पालना गर्न अनुरोध गर्दछु । यो रोगबाट बच्न हामी आफै सचेत हुनुपर्छ र यो रोगबाट डराउनु पर्दैन तर सतर्क रहनुपर्छ भन्न चाहान्छु ।
कीर्तिपुरबाट सन् २०१२ मा Canada जानु भएकी बैजयन्ती नकर्मीको भोगाइः
कीर्तिपुर नगरपालिका–९ नयाँबजारमा माइती भएकी बैजयन्ती नकर्मी बिदेश प्रस्थान गर्नु अघि नेपालमा Kathmandu Medical College मा काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ परिवार सहित क्यानाडाको Calgary, Alberta मा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ । हाल उहाँ क्यानाडामा House wige को रुपमा हुनुहुन्छ ।
Covid-19 विश्वभरि फैलिएपछि त्यहाँको अवस्था वा ब्यतिmगत अनुभवः May 22 मा पठाउनु भएको पत्रको आधारमा )
कोरोना भाइरसले गर्दा संसारका सवै मानिसहरुको जीवन अनिश्चित भयो । हामी मार्च २०२० को मध्यदेखि नै घरमा बसिरहेका छौं। बच्चाहरुको स्कूल बन्द भएर अनलाईन कक्षा भइरहेको छ । अति आवश्यकमा नपरेका व्यवसायहरू सबै बन्द छन् । अरु ठाउँको मलाई थाहा छैन, तर Calgary मा नयाँ सुरक्षा उपायका साथ मे महिनाबाट पहिलो चरणमा बन्द भएका खोल्ने शुरूवाट भयो, जस्मा धेरै जसो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, संग्रहालयहरू, चिडियाखानाहरू पर्दछन् ।
संत्रासले गर्दा बाहिर कतै नगइकन सम्पूर्ण परिवार घरमा नै बस्दै आएका छौं । यहाँ हामी सम्पूर्ण परिवार कोभिडबाट सुरक्षित नै छौ ।
यी मेरा सुझावहरू एक साधारण नागरिकको रूपमा हो । जुन चिकित्सा विशेषज्ञको रूपमा हैन । यदि अति नै आवश्यक छैन भने कृपया घरबाट बाहिर नजानुहोस् । जब तपाईं बाहिर हिड्नु नै पर्ने हुन्छ भने २ मिटर दुरी कायम गरी जानुहोस् । २० सेकेन्ड सम्म साबुनले राम्रोसंग हात
धुनुहोस् । जुत्ता बाहिर फुकालेर घरमा जानुहोस् । घर फर्केपछि कपडा परिवर्तन गर्नुहोस् ।
यदि Covid-19 कुनै लक्षण छ भने तुरुन्तै आफु स्वयम नै Isolation मा बस्नुहोस् साथसाथै तुरुन्तै कोरोना मेडिकल सेन्टरमा जानुहोस्। कडाईका साथ सरकारी नियम र कानूनको पालना गर्नुहोस् । यसलाई सजिलै नलिनुहोस् (केही होइन भनि नठान्नुहोस्) । सबै सुरक्षित रहनुहोस्, धन्यवाद ।
Posted by kirtipur.com.np at 3:31 PM